Yaab: Waxaan horey u leenahay IRC noo gaar ah ... nagu soo biir !! | Laga soo bilaabo Linux
Yaab: Waxaan horey u leenahay IRC noo gaar ah… nagu soo biir !!
Markii uu 4 bilood jiray, adeeg cusub ayaa soo baxay ... annaga Forum, iyo maanta ... inaan nahay 9 bilood jir, waxaan ku dhawaaqeynaa adeeg kale oo cusub: IRC FromLinux
Maxay IRC u tahay? ...
Waxyaabo badan ayaa nooga baahan in aan ka hadalno dadyow badan Linux... SWL, halka, Debian, KDE, Xfce, iwm ... shaki, su'aalo, waxaan rabnaa inaan jawaab u helno su'aalaheena si dhakhso leh, tan labaad, ka dibna isla markiiba inaan weydiiyo su'aal kale, iwm. Ma dooneyno inaan sugno daqiiqado si aan u caddeyno su'aasha ku jirta goobta ama halkan ku yaal baloogga, sidaa darteed ... taasi waa halka ay ku timaaddo hay'addeenna IRC, waxay ka caawisaa si firfircoon, dhaqso.
Laakiin… taageerada IRC waxaa jira dhowr, «Wax cusub kuma biirinayo"maya? 😀
Halkan balooggan waxaan ku abuurnay ku dhowaad beel, waxaan ku wadaagnaa fikradaha, waan ku qoslaynaa, kaftankeenna dhexdeenna ayaan ku wada qaadanaynaa, sidoo kalena wax badan ayaan ka barannay midba midka kale.
Haa, waxaa jira dhowr IRCs ... laakiin meeqo ka mid ah kuwan aan ka heli karno dhammaan isticmaaleyaasha halkan? ... kuwa adeegsadayaasha ah ee aan maalin walba kaftanka iyo talo wadaagno?
Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay barta adag ee IRC-du, waa sida «qolka fadhiga» ee gurigeenna, halkaasoo ay asxaabtu ku kulmaan oo aan ka wada hadalno waxa aan ugu jecelnahay, qosolno, baashaalno, iyo had iyo jeer ... had iyo jeer, barashada 😀
IRC-daani ma suurtowdeen la'aantood [| HuGO |] kaasoo qaatay saacado badan isagoo naga caawinaya qaabeynta IRC, runtii KUNOOD ayaa uga mahadcelinayaa dhammaan caawimaadda uu na siiyay.
Waa tan macluumaadka la isku xiro:
Dekedda SSL: 6697
Waxaan qabanay casharro aan ku xirno Android ama isku mid ah Firefox (iyada oo loo marayo plugin):
Ku xidhnow IRC <º Linux adoo adeegsanaya Chatzilla
Ku xidhnow IRC <º Linux adoo adeegsanaya Android
Ku xidhnow IRC <º Linux adoo adeegsanaya Pidgin
Ku xidhnow IRC <º Linux adoo adeegsanaya XChat
Ku xidhnow IRC <º Linux adoo adeegsanaya Wadahadal
Sida iska cad, shaki ama su'aal kasta waa laga jawaabi doonaa 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Yaab: Waxaan horey u leenahay IRC noo gaar ah… nagu soo biir !!
Waxaan ku biirayaa sababta 🙂
Waxaan qabaa su'aal: waa maxay sababta sanadguuradii blogka maanta haddii maqaalka soo dhaweynta yahay laga bilaabo Julaay 9?
Sababtoo ah Luulyo 4 (isku dhac kadis ah…) waa marka aan diiwaangelino domainka sidiisa oo kale. Iyo FromLinux kaliya ma ahan balooggu, waa badan yahay ... taasi waa sababta aan xisaabta ugu qaato 4ta Luulyo 😀
Isku mid ahaansho? Nah, adigu ima aadan doqonineynin, waxay aheyd xeelad oo dhan in indhaha looga jeediyo dabaaldegyada wadankaas oo aad u jecel Cuba.
Dhab ahaan Boggan waxaa si rasmi ah loo sii daayay 9-kii Luulyo, laakiin mashruuca ayaa dhab ahaan toos uga galay internetka July 4 😀
Mmm, iyo wax kale: sababta http://www.desdelinux.net horseedaa meelna : S
Taasi ma WWW ayaan uga fikirnay Xariirka, si kastaba ha noqotee ... haa run, tani waa cayayaan, si dhakhso leh ayaan u hagaajiyaa waxaana u galiyay inaan u wareego https://blog.desdelinux.net 🙂
Taariikh weyn, Julaay 9 waa maalinta xorriyadda Argentina xD
Si fiican u fiiri Laga soo bilaabo Linux mashruucu wuu dhashay 4 de Julio (Maalinta Xorriyadda Mareykanka) iyo baloogga 9 de Julio (Maalinta Xorriyadda Argentina).. Xor ayaynu nahay, liiibreeessss .. hahaha
HAA !!!! hahaha sidee xiise u leedahay, waligay uma maleyn inay sidaas tahay ... LOL!
Ma tihid saaxiibkey, waxaad tahay kaliya madaxdeyda
O_O… waa maxay cadaabta aad sheegayso?
Sxb ma tihid ee adaa i shaqaaleysiiyay oo kaliya
Laakiin ku siin maayo, HAHAHAHA.
xD ilaa hadda KZKG ^ Gaara wuxuu ogaadey xiriirka uu la leeyahay geesinimada. Farxad!
Waxaan isku dayay XChat waxayna leedahay 'computer aan la aqoon. Malaha wuu qaldamay?
Yaab yaab leh, eeg halkan haddii aad wax khaldan ama wax ah samaynayso:
Kaliya dhig diiwaan gelinta qaladka iyo xogta aad dhigeyso halkaa, waan kaa caawin doonaa wadajir ahaan
Waxaan isku dayi doonaa ... Markii ugu horeysay irc.
Isku mid halkan 😉 fiiri waxyaabaha aad sameyso si aad uga dhex muuqato beeshan, xubnaha "desdelinux" runtii waa la mahadiyey.
Way fiicantahay in la ogaado tareenkaas 😉 aad ayaad u mahadsantahay.
Hagaag, waxaan diyaarinayaa aquamac-yada aan ku xiro XD.
Ok Hore ayaan usameeyay shandadayda. Si loo tijaabiyo irc markii ugu horeysay.
Ma ii sheegi kartaa sida cadaabtu u sameysay ???? Kaliya waxaan helayaa khaladaad.
Waan sameeyay, hehe !!!!
Casharrada Wadahadalka ayaa la waayey hahaha, berri ayaan sameyn doonaa 🙂
Midkale oo waligiis booqday IRC, xoogaa in aan arko sida aan ku galo.
Hahaha waa taas IRC Waa wax badan oo loogu talagalay horumarinta Geek .. xD
Waqtigiisii ​​waxaan u isticmaali jiray inaan kala soo baxo nooc kasta oo waxyaabo ah, filimaan, muusig iyo muusig badan, buugaag, ciyaaro, sawirro laga soo qaaday psx cds. Tani waa in ka badan 5 sano ka hor. Waa maxay waqtiyada wanaagsan, ah.
uff Kama heli karo IPS-kayga 🙁 Waan ka xishoodaa wax kasta oo dhaqaaqa !!!!!
Sida ugu wanaagsan ee aan halkaas ugu akhriyi doonno!
Mahadsanidin kuwa soo galay oo nolosha wax ku soo kordhiyay, runtii 🙂
Qof baa fadlan u samee casharka IRC Quassel, aniga ayaa jaahil ka ah mawduuca 🙂
Waxaan kuugu hambalyeynayaa vibes-ka wanaagsan ee ka jira irc-ka oo gebi ahaanba ka duwan inta badan kanaallada
Gracias tavoWaan ku faraxsanahay inaan ogaanno taas maxaa yeelay taasi waa ujeedkeenna.
Hambalyadaasi waa idinka, idinkuna waxaan kor u qaadaynaa IRC oo keliya ... laakiin innaga keligeen noloshu ma siinno, dhammaantayo waan ka taxaddarnaa firfircoonaantaan wanaagsan (annaga + idinka))
La dhammeeyay, cashar loogu talagalay Wadahadal Waa la qabtay:
Meelkee? … Miyaan meel khaldan dhigay?
Waxaan ula jeedaa inaadan ku qorin faallo, si ay ula mid noqoto kuwa kale
Liiska ayaa lagu daray, waxaan uga tagay faallooyin oo waxaan soo dhigay barta Twitter, wixii talo ah? 🙂
Waxaan kaaga jawaabayaa guddiga mana arkin qoraalka ...
Video-Tutorial si loogu xiro Pidgin iyo IRC laga bilaabo FromLinux
qofna ma garanayaa sida loola xiriiro dareenka ee irc ka Linux?
Hore ayaan iskaga dayay pidgin laakiin kuma xirna irc markaa markaa waxaan iskudayaa Xchat….
Soo jeedin, dhig xiriiri si aad u soo dejiso shahaadada SSL isla markaana aad u adeegsan karto macaamiisha khafiifka ah sida Weechat ama Irssi, aniga macquul iima ahan inaan xiriiro aniga oo aanan gaarin feylka qaabeynta, markaa ikhtiyaarkaas waa la soo dhaweynayaa. By habka, aad u fiican elav iyo KZKG.
Waxaan ugu dambeyntii awooday inaan xiriiro….
Salaan ka timid Chile ..
Weli ma la heli karaa maanta? Laga soo bilaabo saddex macaamiisha irc ayaa ii sheegaya inaan la helin.
Muddo ayey ka maqneyd, waxaan wareejinay server-yada mana aanan helin waqti aan dib ugu cusbooneysiiyo adeegga, waxaan ka raaligelinayaa dib u dhaca.
Haddii aad leedahay shabakad cusub ama aad horeyba u lahayd, waad ku biiri kartaa shabakadeena, waxaan raadineynaa shabakado cusub oo ku xirma shabakadeena, adeegyadeennu waa gnuworld webcity ircu bot X oficial
Linux kernel: mashruuca ugu weyn ee koox-kooxeed
WebGL: 3D shabakadda